UMarguerite waseNavarre: Umfazi wobuNtuko
Ukuncedisa Ukuxoxisana noMnqophiso weCambrai, iLadies Peace
U-Queen Marguerite waseNararre (ngo-Apreli 11, 1491 -Disemba 21, 1549) waziwa ngokuba uncedisa ukuxoxisana noMnqophiso weCambrai, owaziwa ngokuba yiLadies Peace. Umbhali weReenaissance, uMarguerite waseNararre wayefundiswe kakuhle; Wathonya inkosi yaseFransi (umntakwabo), waxhaphaza abaguquleli bezenkolo kunye nabantu , kwaye wayifundisa intombi yakhe, uJeanne d'Albret , ngokwemilinganiselo yeRe Renaissance. Wayengumakhulu kaKumkani Henry IV waseFransi.
Wayebizwa nangokuthi nguMarguerite wase-Angoulême, uMargaret waseNararre, uMargaret wase-Angouleme, uMarguerite De Navarre, uMargarita De Angulema, uMargarita De Navarra.
UMarguerite waseNararre wayeyintombi kaLouise waseSavoy kunye noCharles de Valois-Orléans, u-comte d'Angoulême. Wayefundela ngeelwimi (kuquka iLatini), ifilosofi, imbali kunye ne-theology, efundiswa ngumama kunye nabafundisi. Uyise kaMarguerite ucetyiswa xa wayeneminyaka eli-10 ukuba atshade neNkosana yaseWales, owaba ngu- Henry VIII kamva.
Ubomi bentsapho kunye noBomi
UMarguerite waseNararre watshata noDuke wase-Alencon ngo-1509 xa wayeneminyaka eli-17 ubudala kwaye wayeneminyaka engama-20. Wayefundela kakhulu kunokuba yena, ochazwa ngumntu othile ophila njengelinye "njengelitye kunye ne-dolt," kodwa umtshato wawunenzuzo kumntakwabo , kuthiwa uyindlalifa yesithsaba saseFransi.
Xa umntakwabo, uFrancis I, ephumelela uLouis XII, uMarguerite wayekhonza njengomntu owamkela.
Abafundi beMarguerite babethengisa kwaye baphonononga ukuguqulwa kwezenkolo. Ngomnyaka we-1524, uClaude, intombikazikazi kaFrancis I, wasweleka, washiya iintombi ezimbini ezincinane, uMadeleine noMargaret, ukuba zinyamekele uMarguerite. UMarguerite wabaphakamisa de uFrancis watshata u- Eleanor wase-Austria ngo-1530. UMadeleine, owazalwa ngowe-1520, kamva watshata noJames V waseScotland waza wafa eneminyaka eyi-16 yesifo sofuba; UMargaret, owazalwa ngowe-1523, kamva watshata noEmmanuel Philibert, uMduka waseSavoy, owayenomntwana naye.
I-Duke yalimala kwi-Battle of Pavia, ngo-1525, apho umntakwabo kaMarguerite, uFrancis I, wabanjwa. UFrancis wayebanjwe eSpeyin, uMarguerite wenyuka waza wanceda unina, uLouise waseSavoy, uxoxisana nokukhululwa kukaFrancis kunye neSivumelwano saseCambrai, esaziwa ngokuba yiLadies Peace (Paix des Dames). Icandelo lemiqathango yalo melwano kukuba uFrancis watshata no-Eleanor wase-Austria, okwenzayo ngo-1530.
Umyeni kaMarguerite, uDuke, wafa ngenxa yokulimala kwakhe emva kweFrancis. UMarguerite wayengenabantwana ngomtshato wakhe kuDuke waseAlencon.
Ngowe-1527, uMarguerite watshata noHenry d'Albret, uKumkani waseNararre, emncinane kweminyaka elishumi kunako. Ngaphansi kwefuthe lakhe, uHenry waqala ukuguqulwa komthetho kunye noqoqosho, kwaye inkundla yaba yindawo yabaguquleli bezenkolo. Babenentombi enye, uJeanne d'Albret , kunye nendodana eyafa njengomntwana. Ngoxa uMarguerite eqhubeka enempembelelo enkundleni yomntakwabo, yena kunye nomyeni wakhe baxhamla ngokukhawuleza, okanye mhlawumbi akuzange kube njalo. I-salon yakhe, eyaziwa ngokuthi "i-New Parnassas," yabutha abaphandi abaneempembelelo kunye nabanye.
UMarguerite waseNararre wathatha uxanduva lwemfundo yentombi yakhe, uJeanne d'Albret, owaba yinkokheli kaHuguenot kwaye unyana wakhe waba nguKumkani uHenry IV oyiFransi.
UMarguerite akazange ahambe ukuya kuba nguCalvin , kwaye wayehlukane nentombi yakhe uJeanne phezu kwenkolo. Kodwa uFrancis weza ukuchasana nabaninzi abaguquleli abaye baqhagamshelana noMarguerite, kwaye oko kwaholela ekuhambeni phakathi kukaMarguerite noFrancis.
UMarguerite waseNararre wabhala iindinyana zonqulo kunye namafutshane ambalwa. Indinyana yakhe ibonakalisa inkolo yakhe engeyiyo inkolo, njengoko yayithonywa ngabantu kwaye yayixhomekeke kwiingcamango. Washicilela imbongo yakhe yokuqala, "Miroir de l'âme pécheresse," emva kokufa kwendodana yakhe ngo-1530.
Inkosikazi yaseEngland Elizabeth (i- Queen Elizabeth I yeNgilani ezayo yaseNgilandi) yaguqulela uMarguerite ngokuthi "Miroir de l'âme pécheresse" (1531) njengokucamngca koMoya (1548). UMarguerite wapapasha esithi "Les Marguerites de la Marguerite des princesses tresillustre royne de Navarre" kunye ne "Suyte des Marguerites de la Marguerite des princesses tresillustre royne de Navarre" ngo-1548, emva kokufa kukaFrancis
UMarguerite waseNararre wafa eneminyaka eyi-57 e-Odos. Iqoqo likaMarguerite lamabali angama-72-amaninzi wabasetyhini-lapapashwa emva kokufa kwakhe phantsi kwesihloko esithi L'Hemptameron des Nouvelles , ebizwa ngokuba nguHeptameron .
Nangona akuqinisekanga, kucaciswa ukuba uMarguerite wayenempembelelo ku- Anne Boleyn xa uAnne eFransi njengendoda enomlindela u-Queen Claude, udadewabo kaMarguerite.
Ininzi yevesi likaMarguerite ayizange iqokelelwe ize iphapashwe kuze kube ngu-1896, xa yapapashwa njenge- Les Dernières poésies .
Ubumbano obalulekileyo beZingcamango
Itosi elungileyo likhawuleza ubukhulu kunye nobukhulu beekhabhinethi
Iimpawu ze-10 ze-Math-Rock
Uthini Umehluko Phakathi Kokusebenza Kwemikhali kunye ne-Chemical Equation?
5 Iingcamango ezingalunganga malunga nokukhethwa kweNdalo
Ngaba Uncle Tom Cabin Unceda Ukuqalisa Imfazwe Yomphakathi?
IiRicin Poisoning Facts
IiRekhodi zehlabathi ze-100-Meter Women
I-Geologicalic Time Scale: I-Palezozoic Era